Mpiasa tsy miankina misoratra CNaPS: afaka mindrana 200.000 Ar hatramin’ny 500.000 Ar | NewsMada
Mpiasa tsy miankina misoratra CNaPS: afaka mindrana 200.000 Ar hatramin’ny 500.000 Ar
Par Taratra sur 14/08/2020
Nanapa-kevitra ny fanjakana fa hanampy ireo mpiasa any amin’ny tsy miankina, sahirana vokatry ny krizy Covid-19. Fampindramam-bola ho an’ireo miasa amin’ny sehatry ny fizahantany, ny mpampianatra tsy miankina, ny fitaterana, sns.
Nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra, ny 12 aogositra teo, ny didim-panjakana sy ny volavolan-dalàna mamaritra ny fampindramam-bola ho an’ny mpiasa any amin’ny orinasa tsy miankina. Voakasik’izany ireo mpiasa misoratra any amin’ny CNaPS ka mahaloa ara-dalàna ny latsakembony ny mpampiasa, na ny orinasa misoratra ara-dalàna. Misitraka ity fampindramam-bola ity ireo mpiasa tena niharan’ny krizy Covid-19, tsy afaka niasa nefa tsy natsahatra ny fifanarahany amin’ny mpampiasa. Anisan’izany ny fizahantany, ny trano fisakafoana na fampiantranoana, ny fitaterana, ny mpampianatra tsy miankina, ny orinasa afaka haba, sns.
Nilaza ny tale jeneralin’ny CNaPS, Rakotondrainibe Mamy fa ny orinasa mpampiasa no manao ny masontsivana ho an’ireo hisitraka izany ary efa vonona handray ny lisitra ny CNaPS, manomboka amin’ny alatsinainy 17 aogositra ho avy izao. Mpiasa efa niasa herintaona farafahakeliny (hatramin’ny 31 marsa teo). Fampindramam-bola 200.000 Ar hatramin’ny 500.000 Ar no azo indramina.
Esorina tsikelikely amin’ny karama, tsy misy zanabola
Manomboka amin’ny janoary 2021 ny fanonerana azy, tsy mihoatra ny 10%, alaina tsikelikely amin’ny karama raisina isam-bolana ary tsy misy ny zanabola (0%).
Ny banky no miandraikitra manontolo ny fandefasana ny vola sy ny fitakiana ny famerenam-bola any amin’ireo orinasa fa ny CNaPS kosa no hampita ireo fangatahana fampisamboram-bola avy amin’ny orinasa.
Nanamarika ny DG-n’ny CNaPS fa sambany nanao hetsika manokana toy izao ny CNaPS. Avy amin’ny tahiry eo am-pelatanana avy amin’ny latsakemboka mandritra ny roa taona sy tapany na telo taona eo no nakana ity fampindramam-bola ity.